दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा चुरोट पिउनेहरु ह्वात्तै घटे ! – Korea Pati
June 3, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलमा चुरोट पिउनेहरु ह्वात्तै घटे !
दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलमा धु’म्रपान गर्नेहरुको संख्या घ’टेको छ। सन २०२० मा यो संख्या अहिले सम्मकै सबैभन्दा तल झ’रेको हो। को’रोना भा’इरस म’हामा’रीमा धेरै मानिसले चु’रोट पि’उन छाडेका कारण यो संख्यामा उ’ल्लेख्य कमि आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
सउल मेट्रोपोलिटन गभर्मेण्टले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार युवाहरुमा धु’म्रपान गर्नेको संख्या सन २०२० मा १५.५ प्रतिशत रहन गयो। यो संख्या अघिल्लो बर्षको भन्दा १.२ प्रतिशतले कम हो। यो संख्या कोरियाले रे’कर्ड राख्न थाले देखिकै सबैभन्दा कम हो। कोरियाले सन २००८ बाट धु’म्रपान गर्नेहरुको डाटा राख्न सुरु गरेको थियो।
को’रोनाबाट बच्नका लागि सउल नगर सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको स्वा’स्थमा थप जोड गरेको थियो। सन २०२० मा सउलमा बसोबास गर्ने १ हजार ५ सय जना चुरोट खानेहरुमा गरिएको सर्भेमा २७.७ प्रतिशतले पहिलेभन्दा कम चु’रोट पिउन थालेको बताएका थिए।
त्यस्तै अर्को एक सर्भेमा त्यहाँका ४९.१ प्रतिशत चुरोट खाने मानिसहरुले गत बर्ष यो ल’त छाड्न प्रयास गरेको बताएका छन। चु’रोट पिउन छाड्न प्रयास गर्नेहरु सन २०१९ मा २२.७ प्रतिशत रहेको थियो।
विश्व सू’र्ति दिवसका अवसरमा सोमबार सउलको सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई आफ्नै स्वा’थ्य तथा आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको स्वा’स्थ्यका लागि भएपनि चु’रोट पि उने बानी हटाउन आग्रह गरेको छ।
कोरियाको रो’ग नि’यन्त्रण तथा रो’कथाम एजेन्सीले पनि चुरो’ट पि’उनेहरुलाई को’रोनाको उ’च्च जो’खिम हुने समूहमा राखेको छ। त्यसैगरी विश्व स्वा’स्थ संग’ठनले पनि चु’रोट पि’उनेहरुलाई को’रोनाको जो’खिम समूहमा राखेको छ।
एउटा प्रहरी निरिक्षककाे रहर यात्रा :लाहुरे देखि दक्षिण काेरिया सम्म
पब्लिक स्पिकर बिजेता रमेश प्रसाई कोरिया आउदै।
July 20, 2019 गुरुदत्त न्यौपाने
July 11, 2020 July 11, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
दक्षिण कोरिया कोरोना कहरका बिच थप नेपाली कामदार लैजान तयार
May 20, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने